दरबाहमा कृत्रिम ताल बन्दै -::DainikPatra
दरबाहमा कृत्रिम ताल बन्दै
बटौली। लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई जलमार्ग हुँदै रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका दरबाह क्षेत्रमा ल्याउने योजनाका साथ दरबाह क्षेत्रमा कृत्रिम ताल निर्माणको काम सुरु भएको छ । लुम्बिनी कोरिडोरसँगै जोडिएको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ५ मानपकडी दरबाह क्षेत्रमा कृत्रिम ताल निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।
लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई धार्मिक स्थल दरबाह क्षेत्रमा ल्याउनका लागि गाउँपालिकाले पाँच वर्षे योजनाअन्तर्गत कृत्रिम ताल निर्माण गर्न लागेको हो ।
गाउँपालिकाले तत्कालका लागि ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरी १० लाख रूपैयाँको लागतमा डिपीआर समेत तयार गरिसकेको छ । सो स्थानबाट १८ किलोमिटरको कृत्रिम ताल निर्माण गरी लुम्बिनीसम्म जोड्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको छ । त्यो पुरा गर्न करिब १० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उद्यान, पोखरी, तलाउ, पुलसमेत रहने उक्त कृत्रिम ताल सुरुवाती चरणमा २ किलोमिटर लम्बाई र ५० देखि ७० मिटर चौडाईको हुनेछ ।
“अहिले सुरुवाती चरणमा काम गरेका छौ”, शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष पुन्नेराम गौतमले भने । अहिले तालको दुवै स्थानमा ड्याम बाध्ने काम भइरहेको छ । नदीको नक्साका आधारमा लुम्बिनीसम्म ताललाई लैजाने उनले बताए । गाउँपालिकाबाट उक्त ताल निर्माणमा लगानी हुन नसके प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग थप बजेट मागेर भए पनि ताल निर्माण गरिने जनप्रतिनिधिहरूको भनाई छ ।
१८ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको लुम्बिनीको नहरमा जोड्ने दिर्घकालीन योजनासहित उक्त कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । प्राकृतिक रूपमा नै उत्पादन भएको पानीलाई दुबैतर्फ ड्याम निर्माण गरेर गाउँपालिकाले विभिन्न बहुउद्देश्यीय कार्यहरू समेत गर्ने बताएको छ ।
१० लाख रूपैयाँमा डिपीआर तयार गरिएकोमा पार्किङ्ग, बाल उद्यान, रेष्टुरेन्ट, पानी फोहर, ड्यम(फाटक) लायत निर्माण गरिने छ । हाल पहिलो चरणमा दुई वटा उत्तर दक्षिण क्षेत्रमा ड्याम(फाटक) निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । ५ बर्षसम्म १८ किलोमिटर टाढा रहेको लुम्बिनी नहरमा पानी पु¥याउने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ । प्राकृतिक रूपमा मूलमार्फत निरन्तर खडेरीको समयमा पनि पानी बग्ने भएको कारण सीमसार क्षेत्रको लागि पनि महत्पूर्ण भएको कारण गाउँपालिकाको लगानीमा कार्य अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।
स्टीमर डुङ्गामार्फत् लुम्बिनी आएका पर्यटकहरू मानपकडीसम्म आउने दिर्घकालीन योजना रहेको छ । जसमा मापकडीमा रहेको भुवनेश्वरी दर्बाह कोटईमाइ मन्दिरको समेत अवलोकन गर्न सकिने गरी योजना अगाडि बढाइएको हो । शुद्धोधन गाउँपालिकाको ४, ५ , ६ र ७ नम्बर वडालाई उक्त ताल क्षेत्रले समेट्ने छ । भ्युटावर निर्माण गरी लुम्बिनी अवलोकन गर्न सकिने, तालमा व्यवसायिक रूपमा माछापालन, डुङ्गा सयर, स्टीमर चलाउने लगायतका योजना रहेका छन् । जसको लागि करिब १० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय पुल विभागले आकर्षक पुलसमेत निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । भुवनेश्वरी दर्बाह मन्दिर परिसरदेखि सोही नदी वारपार गर्ने गरी पुल निर्माणको डिपीआर समेत भैसकेको छ । डेढ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भुवनेश्वरी दर्बाह कोटईमाई मन्दिर पुरातात्विक हिसाबले महत्पूर्ण रहेको छ ।